Kedu ka m ga-esi jiri eriri kechie igwe kwụ otu ebe m? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Esi mkpọchi igwe kwụ otu ebe - otu esi ejikwa
Esi mkpọchi igwe kwụ otu ebe - otu esi ejikwa
Kedu ka m ga-esi jiri eriri kechie igwe kwụ otu ebe m?
JirikaUSBna aM mkpọchi
Otutu ndi mmadu hoputara threadiUSBsite n'ihu wheel na gburugburu eku, na mgbe akaghị naUSBsite naM mkpọchiyana wiil azu, eku, naigwe kwụ otu ebeogbe. Usoro a na-enye nchekwube ntakịrị maka ụkwụ ihu, ma na-eme dị ka ihe mgbochi na-egbochi ndị ohi.
Gba ịnyịnya ígwè na-egbukepụ egbukepụ, ha na-atọ ụtọ, na-adị ọcha, ma na-arụ ọrụ nke ọma maka njem na njem n'obodo ndị mepere emepe, ma enwere ego agbakwunyere, ha na-eme ka ọ dị mma, mana dị ka ọtụtụ n'ime gị maara, ha nwere ike ịbụ ihe dị mma maka ndị ohi ma ọ bụ dịka Ọ na-amasị m ịkpọ ha ka ha nwaa igbochi gị mpako na ọ joyụ nke ịdaba n'aka ndị ohi, anyị ejirila kryptonite rụkọọ ọrụ, yabụ anyị ga-agafe ihe nchekwa na ịme nke igwe kwụ otu ebe n'isiokwu a, ma ị bụ maka utinggha na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-aga ụlọ ahịa ma ọ bụ na-eleta ndị enyi, anyị ga-agabiga otu na ebe kacha mma iji kpochie igwe kwụ otu ebe, otu kachasị mma iji mkpọchi iji chekwaa igwe kwụ otu ebe gị, yana ụdị mkpọchi dị iche iche ị nwere ike ikpebi ihe mkpọchi Igwe na-abata n'ụdị na nha dị iche iche na ụdị dị iche iche nwere uru na ọghọm dị na ya, ọbụlagodi ka ọ bụghị mgbe niile ka mma tupu anyị abanye na otu esi eme na ebee ga-ekpochi igwe kwụ otu ebe gị, aga m gafee ụdị mkpọchi dị iche iche ndị nwere ike igodo ike na-abụkarị ndị e mere maka unbreakab ha enweghi isi. yep, nke ahụ bụ okwu m mechara pụta, mana ị nwetara isi, dịka ọmụmaatụ kryptonite na-agbachi mkpọchi ya n'etiti otu na iri, yana otu ịbụ ụdị mkpọchi dịkarịsịrị ala ha na-eme ma ee nke ahụ bụ Best Of The Best The Absolute Gold Ọkọlọtọ Na Mkpọchi mkpọchi igwe kwụ otu ebe Ugbu a, mkpọchi niile anyị nwere ebe a bidoro na ise, mana ị ga-ahụ n'igbe ahụ na ọkwa nchekwa na-ekwu ihe na-erughị ise ga-abụ naanị otu counterdị obere mgbochi ejiri mgbe ị kwụsịrị n'otu ụlọ ahịa. n'ime ime obodo ma ọ bụ ikekwe maka nkwado ndabere na mpaghara? Gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ị na-eme njem ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ ihe ọ bụla. Typedị mkpọchi mbụ ị kwesịrị ịma gbasara ya bụ mkpọchi D.
Ha sitere na ihe dika D-mkpọchi a emebere maka ime n’ime ime obodo rue mkpọchi D-mkpọ iji mee ka ndị ohi kachasị ama ama n’obodo mepere emepe chee echiche banyere obodo Gotham mgbe nkọcha gafere na ị nwere echiche ziri ezi n'etiti agbanyeghị, a na-ahụta mkpọchi D-ike ka ọ bụrụ mkpọchi igwe kwụ otu ebe kachasị ike ma dị nchebe ị nwere ike iji ma ha dị iche na ike na ụdị anwụ ngwa ngwa na ike na ịdị arọ yana atụmatụ ole na ole ndị ọzọ na nke a gosipụtara na ọnụahịa ahụ, ihe dị ka nke a dị oke ọnụ karịa ihe na-adịchaghị ọkụ ma na-adịchaghị mfe D-akpọchi ndị a dịkwa iche iche karịa ka ị wee nweta ụmụ ntakịrị dị ka nke a na ndị buru ibu dị ka nke a, ma emebere ha iji tinye igwe kwụ otu ebe gị na ihe na-agaghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ etiti gị gaa n'akụkụ ọzọ nke igwe kwụ otu ebe dị ka wiil ma ọ bụ knockouts f remote na a nkịtị tactic na ọ bụ ezi tactic iji a D-mkpọchi na Nchikota na ọzọ mkpọchi dị ka a USB mkpọchi ka e meere n'akụkụ ndị ọzọ nke igwe kwụ otu ebe dị ka wiil na ihe ihe ọ bụla ị nwere na igwe kwụ otu ebe gị karịa mkpọchi mkpọchi pụtara na ha nwere ike ịmasị mara mma ịgagharị ma lee anya na akpa, mana ha enweghị ntụkwasị obi ugbu a ka ha na-eji usoro mkpọchi dị iche iche abịa. ma ọ bụ igodo mkpọchi ma ọ bụ ndị nwere loops ndị ahaziri iji ya na Mkpọchi ọzọ haziri maka mkpọchi D-mkpọchi nwere ike ịkwụsị onye ohi nkịtị, mana ha enweghị ntụkwasị obi karịa D-Lock na Bolt Cutters bolt ngwa ngwa ọrụ nke eriri mkpọchi ọ bụ -emekarị ígwè nchara dị ka nke a nwere ụdị mkpuchi plastik na mpụga iji gbochie mmebi ọzọ ka anyị nwere mkpọchi agbụ agwakọta ihe ha mebere nke ọma ọzọ ha nwere usoro mkpuchi dị iche iche nke a nwere mkpọchi mkpọchi ma enwekwara ndị nwere naanị igodo ma ha bịara n'ụdị dị iche iche na ike Ha n'ozuzu ha nwere nchebe karịa mkpọchi USB mana ha esighi ike karịa mkpọchi D mana ha nwere uru agbakwunyere na mkpọchi D na ha nwere ike ịbụ obere ọrụ kwesịrị ekwesị n'ihi agbụ ígwè ahụ na ịchekwa akụkụ dị iche iche nke igwe kwụ otu ebe dị ka D-mkpọchi bụ ụdị nke na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ịbụ obere ihe isi ike n'oge ụfọdụ typedị mkpọchi anyị nwere nke na-adịchaghị ala karịa ndị ọzọ anyị gosiri gị. mkpọchi mkpọchi nke anyị nwere ebe a ugbu a. Gbachi akpọchi nwere ike ịbụ ezigbo uru n'ihi na ha nwere ike weghara obere ohere na akpa gị mgbe ị na-ebu ha karịa D mkpọchi n'ihi na ha na-atụgharị ya kwa oge ma nke a nwere ike ịba uru dị ukwuu, dabere na ebe ị na-ekpochi igwe kwụ otu ebe gị na ụdị nke na-agba ịnyịnya rad ị na-ekpochi, a na-ewere ha dị ka ndị nwere nchebe karịa eriri, mana ọzọ enweghị nchekwa karịa ntụkwasị obi D-tụkwasịrị obi n'ihi na ha nwere ike iguzogide ndị na-egbutu ihe nkwụcha, tungsten-tipped saw or an angle grinder can make short work nke elu isi nke akpọchi, Njirimara ị ga - ahụ gụnyere agbụ ígwè siri ike karị abụọ okpukpu abụọ na gbọmgbọm ndị na - eme mkpọtụ dị elu, yana obere oghere na mkpọchi mkpọchi ihe ndị a na - eme ka o siere mmadụ ike ịgbaji ike dị egwu ma ọ bụ mepee na njedebe nke ala ọrụ ndị a jikọtara ntakịrị, nke a apụtaghị na mkpọchi anaghị arụ ọrụ, mana ha anaghị akwụsi ike na onye ohi ma ọ bụ ọrụ nke Chineke Site n'iji ígwè dị warara na obere mkpọchi mkpọchi mkpọchi ma ọ bụ mkpọchi ị na-eji ga-depen d on a ọtụtụ ihe i bu n'obi ịhapụ ya, niile nke tinye na larịị nke ihe ize ndụ Nke a metụtara otú o yikarịrị ka ọ ga-ezu ohi gị igwe kwụ otu ebe The ọnọdụ dị ezigbo mkpa ụfọdụ ebe nwere ike ịbụ ebe na-ekpo ọkụ maka izu ohi igwe kwụ otu ebe dị ka ọdụ ụgbọ oloko ma anyị na-atụ aro ka ị dọba igwe kwụ otu ebe gị n'okporo ámá ndị dị jụụ dị ka ndị a n'ihi na ebe dị jụụ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na mmadụ ole na ole gburugburu, a pụrụ inye onye ohi ahụ oge ka ukwuu iji rụọ ọrụ igwe kwụ otu ebe.
Chee echiche banyere ihe ndị ọzọ, dị ka ịnọdụ ala na cafes ma ọ bụ ịgagharị na-arụsi ọrụ ike nwekwara ike ịbụ ihe na-emenye ụjọ, ma chee echiche banyere ebe ndị na-adịghị mma iji kpochie igwe kwụ otu ebe ka okporo ụzọ ndị a bụrụ ezigbo ihe atụ. Agaghị m akpọchi igwe kwụ otu ebe m n’akụkụ a, mana na-agbanwe n’elu akụkụ nke ọzọ, ebe ụzọ bụ ebe na-adighi adọrọ mmasị karị, enwekwara onye nche n’ebe a etinye ya ebe ahụ Ọ nọ ebe ahụ maka ọtụtụ ụbọchị ọ ga-ekwe omume na ọ bụrụ na onye ohi na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe, ọ ga-ahụkwa ya ebe mara mma na-enweghị mmasị maka mmadụ ịrụ ọrụ na igwe kwụ otu ebe ahụ yana kwa nkọwapụta amamịghe nke ọma m tinyere mgbachi n'ezie ebe igodo ahụ dị ma ọ bụghị na ya peeji a a aghụghọ zuru ezu ma ọ na-eme ka ọ sikwuoro ya ike ịrụ ọrụ na mkpọchi ma ọ bụrụ na ị ga-anwa ma na-ahọrọ mgbe niile ijikọ igwe kwụ otu ebe gị na ihe enweghị ike ịkpụ Ayi nwere ọtụtụ nhọrọ ka ị wee nwee ịmịcha ọkpọkọ. Fọdụ ndị na-akpọchi igwe kwụ otu ebe ha mgbe ụfọdụ iji kpochapụ ọkpọkọ, mana ha nwekwara ike belata n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na ejiri plastik mee ha, ị nwere ike ịdọpụ ha na mgbidi ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie, ị maara, lampposts ebe a nwere ike ịbụ ezigbo siri ike na ihe dị mma iji mechie igwe kwụ otu ebe, mana ọ nwere ike belata ihe egwu nke imebi ndị mmadụ na-agafere ya wee banye n'ime ya.
Enwekwara ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè Georgia ndị a na-eme ebe a nke sitere na ígwè nkedo ma ọ bụ ihe nkedo na-arụ ọrụ ngwa ngwa nke na-eme ka ọ dị mfe karị ịfefe karịa nchara siri ike ị ga-enweta site na ezigbo D-Lock Agaghị m gosi gị otu howzọ kachasị mma iji kpọchie igwe kwụ otu ebe na usoro m ga - eji ma enwere ndụmọdụ ole na ole iji mee ka ọ dị nchebe karịa nke mbụ nke a bụ mpaghara dị mma, ọ bụ ụzọ dị mma, ọ bụghị na ị maghị, enweghi ọtụtụ akara nke mpụ, yana ọtụtụ ndị ji ụkwụ aga, ọ na-enwu nke ọma na ee, ị maara ọtụtụ E nwere ọtụtụ mmadụ ebe a ma anyị nwere igwe kwụ otu ebe pụrụ iche ebe a dị mma ma dịkwa mma ma ịmara na ọ nweghị onye nwere ike iburu igwe kwụ otu ebe dị ka a ga - asị na ọ ga - abụ bollard ma ọ bụ aka na ukwu ha nwere ike igbutu ma ọ bụ ihe dị ka m ga - agbachi igwe kwụ otu ebe ka ọ bara uru nke akụkụ dị iche iche, ịbụ de Ogwe osisi bụ akụkụ kachasị baa uru, na - esochi azụ na mgbe ahụ ụkwụ ihu, yabụ n'usoro ahụ ịchọrọ ịchekwa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, m ga-eji mkpọchi D iji nweta ma okpokolo agba na wiil nke azu, ya na nkpochi D na-agabiga Mgbe etinyechara uzu na okpokoro, m ga-ejikwa eriri USB dika uzo nke abuo iji chekwaa ihu ihu. Naanị gbanye ya site na nkedo D-mkpọchi, site na etiti ahụ, wee gafere site na ihu ihu, wee laghachi n'ime D-mkpọchi dịka sonext, tinye njedebe nke D-Lockback na ma ọ bụrụ na ị nwere ike, ọnọdụ usoro mkpọchi nke D-mkpọchi ka ọ na - eme ka ọrụ sie ike Kwuo maka ndị buru ibu, ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mma mgbe ị nwere mkpọchi D-siri ike nke ga - abụ ihe rụrụ arụ mgbe ị kpọchiri igwe kwụ otu ebe gị, nke na - ahapụ ohere maka ndị mmadụ gburugburu inwekwu ndị ohi iji nweta ngwá ọrụ ka ha wee nwee ike mepee mkpọchi D na ịchọrọ obere ohere n'etiti ebe ị na-ekpochi igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe n'onwe ya, ọ bụ ya mere ị ga-eji jiri obere mkpọchi D, nke dị ntakịrị karịa nke a bara uru na ọnọdụ ndị a. Ọ dị ka ọ doro anya, ọ ga-abụ ihe doro anya nye ọtụtụ gị, mana ahụla m ka ndị mmadụ kpochiri igwe kwụ otu ebe n'ụzọ a n'ime ihe yiri ihe siri ike nke na-agagharị agagharị na enweghị ebe ọ bụla, mana ha kpochiri ya, nke bụ igwe kwụ otu ebe na-adịghị n'aka na-eme ka kpochapụwo ihe atụ na e nwere ihe dị ka ụdị bollard na ụlọ elu, ị nwere ike dị kpọchie ya ka i bulie ya ozugbo m pụọ igwe kwụ otu ebe, ugbu a ị na-ahụ gị mgbe e mesịrị na mgbakwunye to nwere ike jiri eriri ma ọ bụ ụdị mkpọchi ọzọ karịa eriri iji chebe ụkwụ ihu nwere ihu na etiti yana nke ahụ nwere ike ịbụ mkpọchi D ma ọ bụ mkpọchi olu ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ, mana ọzọghị na mkpọchi ahụ dị n'elu site na nke a na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịrụ ọrụ kama ịtọgbọ ya dị ka nke ahụ n'ozuzu karịa mkpọchi ka mma ọ na-eme ka ọ ghara ịmasị D ị zụrụ ma ọ bụrụ na ị kpọchiri igwe kwụ otu ebe gị kwa ụbọchị, e.
Dịka ọmụmaatụ, n'ebe ọrụ, ị nwere ike mechie mkpọchi dị otú ahụ na ala nke ebe a na-agba ịnyịnya ígwè ka ị ghara ịdọrọ ha n'ụzọ gị oge ọ bụla n'ihi na mkpọchi dị ka nke a dị oke nchebe, mana ha dị oke arọ. Ha nwere mkpuchi pụrụ iche nke ị nwere ike ịdọrọ iji gbochie mgbochi mmiri na mbibi ihu igwe na mkpọchi ahụ, nke na-eme ka ha dị mma maka ụdị ebumnuche a, ọkwa nke abụọ n'elu akara ike nke onye nrụpụta nke a na-erekwa n'enweghị nsogbu ọ bụla nwere nnwere onwe ule na asambodo nke na-enyocha mkpọchi dabere na ụkpụrụ nke aka ya, n'ihi na nke a na-abụkarị naanị nyocha nke ndị ọrụ mkpuchi na-amata. Na nchịkọta, ị maara otu ị ga-esi kpọchie igwe kwụ otu ebe gị, bụ mkpọchi ịchọrọ ịga, kedu ka ị siri chọọ ya na ebe ị ga-aga Site na ịtụle isi ihe niile anyị tụlere n'isiokwu a, ị kwesịrị ịdị na-aga nke ọma na ịchekwa igwe kwụ otu ebe gị eg tupu akpọchi ya na a ọha ohere ma ọ bụrụ na ị nwere n'ezie oké ọnụ mmiri na gị igwe kwụ otu ebe.
O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na agbanyero wiil ndị ahụ na okpokoro ahụ ka ndị ohi ga-ewepụsị ihe ndị dị na igwe gị, hapụ gị wiil na okpokoro ahụ. Egwuregwu ahụ bụ ịnwa ịme igwe gị ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ nke ndị ohi. buru n'uche na antelopes yitụrụ ịchụ nta, ịkwesighi ịbụ ọdụm ọdụm, ị gaghị abụ anụ na-adịghị ike na isi ọzọ mgbe ị na-ahọrọ igwe kwụ otu ebe iji rụọ ebe mepere emepe. apụ, ọ bụ ezi echiche ịnwe igwe kwụ otu ebe na-abaghị uru na ntụnyere antelope, ị chọghị ka igwe kwụ otu ebe gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ karịa ihe ọ bụla na-atụ anya na ị nwere mmasị na edemede a ma hụ na ọ bụ ihe mmụta yana ndụmọdụ ndị a olile anya na ị nwere ike ịme igwe kwụ otu ebe gị ka ọ ghara ịnwe nsogbu na ndị ohi ma ọ bụrụ na ị nyeghị anyị mkpịsị aka ma mee ka anyị mata na nkọwa nke isiokwu ị ga-achọ ile n'ọdịnihu na igwe kwụ otu ebe gị. Lee gị n'ọdịnihu ndị ọzọ
Kedụ ka m ga-esi mechie igwe kwụ otu ebe n’enweghị mkpọchi?
Otu esi echedokaIgwe kwụ otu ebe n’enweghị mkpọchi
Ekwela ka nke gị bụrụ nhọrọ mbụ ha. Kaigwe kwụ otu ebe gịfuru efu n’etiti igwe mmadu. Park n'akụkụ a nicerigwe kwụ otu ebe.
Kwado amkpọchi. Zip agbatị. Vine na Alaka. Eriri Bungee. Okpu agha
Gbanyụọigwe kwụ otu ebe gị. Wepu wiil. Tọpụ wiilị. Wepu agbụ ahụ. Werenke gioche oche.
Ọkt 6 2020
Enwere mkpọchi igwe kwụ otu ebe na-enweghị ike ịbe?
Otu n'ime nhọrọ kachasị sie ike ma sie ike na usoro nkeMkpọchi igwe kwụ otu ebe nwere ike'ga-abụebipụbụ Kryptonite Fahgettaboudit U-mkpọchi. A maara New York nke ọmaigwe kwụ otu ebeizu ohi, na Kryptonite Fahgettaboudit ka emepụtara n'ụzọ pụrụ iche iji kwụsị NYCigwe kwụ otu ebeohi n'ụzọ ya.
ka umunwanyi wright ahu mechuru igwe
(Drill hums) (hama) (nwoke na-eti mkpu) - Nabata azụ na Ihe dị n'ime, Abụ m Lincoln na nke a bụ Dan na taa nke a bụ igwe eletrik igwe ọhụrụ m nwetara maka ekeresimesi - Ọ bụ igwe kwụ otu ebe mara mma. Udo na nchekwa bụ ihe onye ọ bụla na-eche banyere ya. SimpliSafe na-akwado edemede a, ọrụ nchekwa ụlọ maka ụlọ gị.
Anyị ga-ekwu maka nke a ruo na ngwụcha nke edemede ahụ, yabụ nọrọ na-ege ntị. Anyị chọrọ ka nchekwa dị ka o kwere mee ma kpuchido igwe kwụ otu ebe a, ya mere, agara m Amazon wee zụta mkpọchi igwe elekere ise ma ọ bụ anọ kachasị sie ike ị nwere ike ịzụta na Amazon - nke ahụ dịka ụdọ aka - ọ dị ka nnukwu aka Mgbaaka gị igwe kwụ otu ebe. Kedu otu siri ike mkpọchi igwe kwụ otu ebe a? Ka anyị hụ nke kacha sie ike Lincoln kwesịrị iji igwe kwụ otu ebe mgbe ọ na-aga ụlọ akwụkwọ.
Nke a bụ mkpọchi Lincoln nke ọ na-eji nwa oge. Ka anyi nwalee ya na umu ihe ndia. Ka anyị hụ ma ndị a ga-ebipụ, ọ dị mma na m nwere ya, yabụ m na-apịkọta ya ọnụ. (lukewarm) - Nke ahụ dị mfe nghọta - Ọ dị nfe na ọbụlagodi Lincoln nwere ike ime ya na akwara nwa ya. (ọchị) - ọ dị mfe - nke a bụ ụdị mkpọchi igwe kwụ otu ebe ị zụtara eriri dị n'ime.
I dikwa oke ike. Yabụ ọ bụrụ na ị na-anwa ịchekwa igwe kwụ otu ebe gị, ọ nwere ike ọ gaghị aba uru ịzụta mkpọchi dị ọnụ ala. Ka anyị jee, ọ dị mma, pịa London ugbu a.
Gaba! Gaba, i nwetara ya! Mana ọ fọrọ nke nta ka ọ nweta ya, ọ fọrọ nke nta - (mkpu) - emere m ya! - managed jisiri! Ọ dị mfe na ọbụlagodi klas nke asatọ na klasị nke atọ, ya bụ, nwata nwanyị nwere ụta JoJo Siwa na ntutu ya, enwere ike ịkpụji ọkara. Yabụ jụọ nhọrọ ndụ gị ma ọ bụrụ na nke a bụ mkpọchi igwe kwụ otu ebe ị họrọ iji maka ụmụaka gị n'ụgba igwe gị dị oke ọnụ ma ọ bụ ọbụlagodi na-adịghị ọnụ mgbe ị zigara ha ụlọ akwụkwọ. London, ekele maka mọzụlụ. - Odi mma, ije oma. - Ehee.
Mkpọchi nọmba onye na-agbaji. Kedụ banyere mkpọchi kacha sie ike n'ụwa? A na-ejikwa mkpọchi igwe kwụ otu ebe maka ọgba tum tum. A na m eche ma anyi ga - eji ya meghe ya. - Ọ mara ezigbo mma.
Oh nke ahụ dị ike. (grunts) (pound) Ọ dị mma, echere m na ọ gafere ule maka nwoke a. - Ọ mere nkụkpọ? - Gịnị ka ọ mere? Obere na akuku abuo. o mere ntakịrị.
Otu mkpọchi igwe kwụ otu ebe gbagọrọ agbagọ na igwe eji arụ ọrụ. (pounding) (upbeat music) Ọ dị mma, anyị nwere nnukwu mgbape ochie n’ala, site na otu kụrụ. Ngwongwo siri ike.
Anyị kwenyere na clipper na sledgehammer ga-arụ ọrụ na mkpọchi a) belata ihe, kpochapụ igwe kwụ otu ebe ma pụọ. Ya mere, bụ a n'akuku grinder aga bee site na nke a crazy, siri ike na-achọ Master mkpọchi Ihọd? (egwu obi ụtọ) Mba! - Eweghị ogologo oge ahụ. - you gụrụ? - Um, ọ dị ka - nkeji? 30 sekọnd? - Sekọnd 20 - Ọ na - ada ụda - Ọ na - ewute igwe kwụ m n’ịnyịnya - igwe kwụ otu ebe gị na - adị mma. - Ọ fọrọ nke nta ka nke ahụ dị ka anyị na-eme a isiokwu nke tibanye n'ime igwe kwụ otu ebe, nke ahụ abụghị nzube anyị.
Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị - gịnị ka ọ bụ? Mkpọchi igwe kwụ otu ebe.- N'ime mkpọchi igwe kwụ otu ebe nke ị hụrụ ugbu a, nke a bụ nke kachasị ọnụ, $ 135.- Nke ahụ? - Eeh.
Ọ bụ titanium --- Karịa na olu ahụ? - Karịa nnukwu ihe olu ahụ kryptonite, ee - ọ bụghịdị nke ahụ dị arọ. (egwu obi ụtọ) - Lekọta mkpịsị aka gị, Lincoln - Nke a dị mma ile anya. (mkpu) - Ow! - Lee anya na nke a, Titan.
Site n'aka nwa ọjọọ ahụ.- Ọ kụrụ aka m dị ka ọ na-amị amị. Kpọmkwem dị ka ọkwado ya.
yoga maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè
Mana ahụrụ m obere ọkụ ahụ, gịnị bụ ihe ahụ? - Anụrụ m ya ka ọ na-eme ka obere mkpọtụ mkpọtụ, mana echere m na ọ nwere ike ọ bụ akwa plastik a dị na ya. Ma ee e, ọ dị nnọọ ọcha. - Ụzọ adịghị. - Azụla mkpọchi $ 135 ahụ.
Nke a bụ nke kachasị ọnụ. Ezi mara. Odida - Na nke na - esote - Kryptonite! (Rock music) Onye na-eji Kryptonite? - Ọfọn, na amaokwu Batman, Batman jiri Kryptonite megide Superman - Nke ahụ bụ ihe Batman ji megide Superman.
Jide nke ahụ, Lincoln, Ezuru m ịnyịnya ígwè Batman chere na ọ mere ya (ọchị), ọ mere n'ụzọ ahụ. Nke ahụ anaghị arụ ọrụ. Adịghị mma. (chuckles) Kryptonite Evolution. Gaa! (upbeat music) (hammering) Plastic ahụ meghere, naanị ya nwere plastik gbara ya gburugburu, mana iguzosi ike n'ezi ihe ka siri ike nke ọma, ugbu a maka ule kachasị sie ike niile.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe, Njikọ? - Uh, nkeji atọ. - Nkeji atọ? M na-ekwu ihe na-erughị 30 sekọnd. (Joy music) agbagha, kwụsị ya.
Kwụsị oge. Ọ bụghị naanị na m mere mbepụ, m bebiri akụkụ abụọ dị iche iche na ya wee bepụ ngalaba niile ka ị nwee ike ịga mgbe ahụ, ọ ga-abụ na ọ dị ọkụ, ka anyị hụ na ọ dị ntakịrị ọkụ. Yabụ ị nwere ike ịga otu a. - Ụzọ adịghị! - Wepụ ya. - Ogologo oge ole ka nke ahụ bụ? - Lelee etu o si ekpo ọkụ! M na-egbupụcha ihe niile.
Ọ na-ekpo ọkụ, m gbara ọkụ mkpịsị aka m kpamkpam. - Enwere m ike imetụ ya aka? - Elela anya, ị hụrụ nke ahụ mara? Nke a gbara ọkụ. Enweghị m mmetụta ugbu a.
Kryptonite! Nke a bụ New York mkpọchi Kryptonite. I na acho igwa m ka mchefuo. Nwoke a mara abụba, echeghị m na nke ahụ ga-arụ ọrụ ebe a.
Enwere m ike. Enweghị m ike ịnweta ya. - Ọfọn onye a gafere ule mbụ. (Popping) (egwu na-ada ụda) - Echere m, ọ dị m ka ọ dara ntakịrị ebe ahụ.
Nke ahụ bụ naanị mkpuchi mkpuchi dị mma na njedebe ya. Echere m na m na-enwe ọganihu, ma ee e, enwere ụfọdụ igwe nchara n’okpuru. Ọ dị mma, nke a gafere ule sledgehammer.
Lincoln, ogologo oge ole ka i chere ọ ga-ewe? - Nke a na-ewe 15 sekọnd. - 36 sekọnd. - Chaị, ọ dị mma. - 36, ekwuru m, 36-26 sekọnd. (Joy music) Anyị na-na na, ma ọ bụghị nke na nnukwu ụlọ.
Ọ dịghị ka site na nnukwu ụlọ. Ọ dị ka nke a, echere m, enwere m ike ịme okpukpu abụọ dịka nke ikpeazụ. (Upbeat music) (hum) Ka anyị pụọ.
Nke ahụ mara mma ma na ọ gbazee, mana ị nwere ike ịpụ ya n'ụgbọala ahụ? M ga-enwe nke abụọ bee a otutu (upbeat music) ọganihu, nke ahụ bụ ihe anyị kwesịrị mere site na mmalite. Emechara m mee nke abụọ. Are bụ mmeri.
Anyi amutala na enwere nkpachi dika ndi abuo ndia na-adi mfe site na ihe di iche iche, dika ufodu di ike, dika nwoke a ma obu ihe a. Ha kariri oru karie ma o bu obere nkwenye. Onye na-egwe ihe nkuku nwere ike belata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpempe ígwè ọ bụla, ụdị mkpọchi ọ bụla.
Otu ihe a masịrị m - ọ dị mma. - Ọ dị mma. E nwekwara ọtụtụ ụzọ ị ga-esi chebe ezinụlọ gị, ụlọ gị na ihe onwunwe gị.
Anyị họọrọ SimpliSafe. SimpliSafe bụ nnọọ irè na ntụkwasị obi nke na-edebe ebe obibi gị mma. A na-enyocha ihe niile 24/7 site n'aka ndị ọkachamara ga-akpọ gị na mberede ma zipụ ndị uwe ojii ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ọ dị mfe iji ma kensinammuo. Emere m ya na obere oge. Anyị ga-ewu ụlọ na n'afọ na-esote ụlọ mgbazinye nke anyị bi na ya ugbu a, ekwela ka anyị tinye kposara na mgbidi.
Ihe mmetụta niile dị iche iche, ndị nyocha ahụ, ha niile nwere ike iji akwụkwọ mmado na-abụghị mgbịrịgba ọnụ ụzọ, mana na mgbịrịgba ọnụ ụzọ ahụ enwere m ike iji oghere ịghasa adịlarịrị site na mgbịrịgba ọnụ ụzọ ọdịnala. Ugbu a na SimpliSafe anyị nwere mgbịrịgba ọnụ ụzọ nke na-edekọ onye ọ bụla gosipụtara, ma ha pịa mgbịrịgba ọnụ ụzọ ma ọ bụ na ha abanyeghị, anyị ahụlarị ya. Ọbụna anyị nwere ihe mmetụta maka carbon monoxide ma ọ bụ maka mmiri mmiri na ebe dị iche iche ọ ga-enyocha ma anyị nọ n'ụlọ ma ọ bụ na anyị anọghị.
SimpliSafe nwere ọnụ ahịa ziri ezi na nke eziokwu na enweghị nkwekọrịta ma ọ bụ ụgwọ zoro ezo ka ị ghara ịbanye na nkwekọrịta ogologo oge rapaara na usoro nchekwa gị. Ma ọ kwadebere maka ọnọdụ kachasị njọ mgbe WiFi gị dara ma ọ bụ ike gị ga-apụ na atụmatụ ndị masịrị m, dịka ịnụrụ obere chime n'ime isi ụlọ na-agwa m otu n'ime ọnụ ụzọ meghere. Ọ dị ka atụmatụ ndị a na-eche echiche n'ezie dị ka, hey, ọnụ ụzọ gị mepere, gaa, mechie ọnụ ụzọ gị.
Yabụ ma ị na-agbazite ụlọ ma ọ bụ nwee ụlọ, ana m akwado SimpliSafe, ọ arụ ọrụ dị ukwuu maka ezinụlọ anyị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ya ị nwere ike ịga na simplisafe.com/whatsinside wee nweta ozi niile mado njikọ ahụ na nkọwa ahụ.
Daalụ SimpliSafe maka ịkwado isiokwu a. Anyị mụtara ọtụtụ ihe gbasara nchekwa taa. Kedu ihe dị mma na ihe na-agaghị adị? - Ee, dị ka nke a, ọ bụghị nke kachasị nchebe.
ngwa ngwa ibu
Mana nke a, ee, ọ dị mma. - Mee ka anyị mata n’okwu nke igwe kwụ otu ebe kachasị amasị gị na nke ị ga - azụta n’ikpeazụ? (Obi ụtọ na-ada ụda) Ya mere, ọ dị ka onye ohi na-abịa n'ọnụ ụzọ gị, ị hụrụ, enwere m ike ịhụ ya kpamkpam, ọ na - eburu ya, ọ bụ lincoln. (n'ọnụ ụzọ na-ada ụda ugboro ugboro)
Enwere m ike ịkpọchi ịnyịnya ígwè m ka ọ banye n'okporo ámá?
Ọ dị mmamkpọchinke giigwe kwụ otu ebeRue Obodoihe ịrịba ama, mita, naigwe kwụ otu eberacks. Ọ bụrụ na gịigwe kwụ otu ebena-ebibi ma gịnwere ike'jiri ya, gbaa mbọ hụ na iwepu etiti ahụ na akụkụ ndị fọdụrụ. Ma ọ bụghị ya, ndị uwe ojii ga - ejide ya ozugbo elekere 72 (mana ọ ga - abụ n'oge na - adịghị anya) mgbe mmadụ chọpụtara na enweghị ike ịrụ ọrụ.Eprel 24 2013
Kedu mkpọchi enweghị ike iji ihe ọkụkụ belata ya?
Chain Kachasị Mma nwere Hexagonal ma ọ bụ Njikọ Ogwe
Otu ígwè ọrụ siri ike, nke siri ike nke nwere njikọ nke hexagonal na-egbochi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ohi ọ bụla na abolt cutter. Njikọ hexagonal (ma ọ bụ square ma ọ bụ trapezoidal) na-eme ka ọ ghara ikwe omumebolt egbutusịna-adịgide adịgide.4wa 4 2021
Kedụ ka m ga-esi mee ka igwe ohi m ghara ịna-atọ ndị ohi ụtọ?
Dirtfọdụ unyi ma ọ bụ duct teepu nwere ikeimeọ na-ele anyana-adịchaghị mmakaihecrooks. N'ihi naigweechebe teepu gị seatpost, aka, na dị iche iche ebe gị eku na-imenke giigwe kwụ otu ebeakụkụ dị ka eyi na-adịghị mma.05.03.2021
Kedu ihe mkpọchi kachasị sie ike ịbanye?
ABUS Granit: otu n’ime ihe mkpuchi nchekwa ụwa zuru oke na nguzogide ike nke karịrị tọn isii. Ọkaakpọchinwere nkwụsi ike nke karịrị tọn isii, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume maka ndị mwakpo ịtọhapụ agbụ ahụ namkpọchisite n'ike.
Enwere mkpọchi nke na - enweghị ike ịhọrọ?
Ebe ahụmbaakpọchi ndị na-enweghị ike ịchọtan'ihi na ihe niileakpọchinwere ikeẹmenke usụn̄ kiet m̀m or eken. Ọkọlọtọ ma pịaakpọchinwere ikeẹmenma ọ bụ nanị gafere ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Smartakpọchina-ejighị igodo nwere ike weere dị ka ihe agaghị akwụ ụgwọ, mana enwere ike hacked mgbe ụfọdụ.
Enwere mkpọchi ọ bụla na-ahọrọ ihe akaebe?
Ọ bụghịakpọchibụ n'eziebulie ihe akaebe, ma ọ bụ hụ na onye omekome enweghị ike ịgafe ha, mana ị nwere ike ịme ihe iji melite nchebe nke ọnụ ụzọ mpụga gị dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-echegbu gị ugbu amkpọchinwere ike na-adịghị ike, nwere ike ị chọrọ ịkpọ a ahụmahụ Ulo olu.Ọgọst 13 2019
Kedu ụdị mkpọchi enweghị ike ịhọrọ?
'Ka ngwá ọrụ wee ruo atụdo na BowleyMkpọchi, a ghaghi ido ya dika ahihia nke azu, dika ogodo, umu aka nke Bowleydeena mpaghara 'Otu o si aru oru' nke webusaiti ha. 'Igodo ahụ nwere ike ịtụgharị naanị ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ isii nke anụ ọhịa ma nke ahụ metụtara yaghotanakwa.Dec. 4 2015
Enwere ike ịkwụsị mkpọchi mkpọchi?
Ihe na-erughị $ 30 ịnwere ikemfeokukuproof ma bulie proof gịsite na! Ngwaahịa tinye a na-eme ọkọlọtọ ọ bụlaokpokorokaokukuakaebemkpọchima bulie ihe akaebemkpọchi. Were nke giakpọchi ụzọgaa na mkpọchi igwe. Ulo olunwere ikewụnye pụrụ iche atụdo na-eme ka ọ na-esikwu ike, ọ bụ ezie na ọ bụghị-agaghị ekwe omume, kaokukukamkpọchi.
Kedu ụzọ kachasị mma iji kpọchie igwe kwụ otu ebe?
Nwekwara ike ịchọ ịtụle ijikọta mkpọchi D-echedoro yana agbụ siri ike ma ọ bụ mgbakwunye mkpọchi siri ike maka wiil ndị ahụ. Zọ kachasị mma iji chebe igwe gị na izu ohi bụ iji mkpọchi dị elu. Igwe igwe na-atụ aro nke a ma a hapụrụ igwe kwụ otu ebe na ebe ọha, ma ọ bụ ọbụlagodi gị n'ụlọ.
Kedu ka onye ohi si ewe mkpọchi igwe kwụ otu ebe?
Onye ohi siri ike ma ọ bụ otu ndị ohi nwere ike ịtụtụrụ ma wepụ ihe dị arọ na igwe kwụ otu ebe. Ikwanye ihe nrịba ama ama iji nwalee ma ha agbanyesiri aka na pavment. Enweghị ike ibuli igwe kwụ otu ebe. Onye ohi toro ogologo nwere ike ibuli igwe kwụ otu ebe n’elu ihe ahụ wee were ya wepu mkpọchi ahụ na nzuzo.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị kpọchighị ịnyịnya ígwè gị?
Ọ bụrụ na ịgbachi ya, mana ọ bụghị n'ụzọ ziri ezi, a ga-ezuru ya. Ọ bụrụ na ịgbachi ya n'ụzọ ziri ezi, ọbụlagodi enwere ike zuo ya, mana opekata mpe ị gbalịsiri ike! Dịka Priceonomics si kọọ na nso nso a, izu ohi igwe jupụtara ebe niile n'obodo ndị America. Ọ bụrụ na ị na-eji ịnyịnya ígwè gị, a ga-ezuru ya mgbe niile.